नसर्ने रोग Archives - HealthyKhabar
वासिङ्टन, २६ भदौ ।संयुक्तराज्य अमेरिकाले सुगन्धित ई–चुरोट (विद्युतीय चुरोट)को सेवनबाट स्वास्थ्य जोखिम बढेको भन्दै त्यस्ता वस्तुको उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ । खासगरी किशोरहरुबीच निकै लोकप्रिय भइरहेको यस चुरोटले फोक्सोमा समस्या आउने गरेको अध्ययनहरुले देखाएका छन् । सुगन्धित ई–चुरोटको कुलतमा फसेका किशोर किशोरी युवावस्थामा पुगेपछि सूर्तिजन्य ई–चुरोट सेवन गर्नेतर्फ उत्प्रेरित हुन सक्ने देखिएको छ । पछिल्ला केही अध्ययनले सुगन्धित ई–चुरोटको सेवनकै कारण पनि बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ । ह्वाइट हाउसमा संवाददाताहरुसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफू र प्रथम महिला मेलानीया ट्रम्प ई–चुरोटको कुलतमा फसेका कारण फोक्सोको गम्भीर बिरामी भएका एक किशोरका बाबुआमाको कथा सुनेर निकै भावुक भएको बताए । “हामी दुबैले ती किशोरको व्यथा पढेका छौं,” उनले भने । “हामीजस्तै धेरै मानिसले यो कथा पढेका छन्, र यसको सेवनबाट मानिसहरुको ज्यान गइरहेको छ ।” ह्वाइट हाउसमा राष्ट्रपतिका साथ अमेरिकी खाद्य तथा औषधि विभाग (एफडीए) का कार्यवाहक प्रमुख नेड सार्पलेस र अमेरिकी स्वास्थ्यमन्त्री अलेक्स अजर पनि सहभागी…
प्रधानमन्त्री ओलीको मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा स्वास्थ्य परीक्षण
काठमाडौँ, भदौ २५ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको महाराजगञ्जस्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण भएको छ । सिंगापुरमा दुई साता लामो उपचार गरी गत शुक्रबार स्वदेश फर्किनुभएका ओली बुधबार मनमोहन सेन्टर पुग्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओली रुटिन फलोअपका लागि त्यहाँ जानुभएको हो । ‘अहिले स्वास्थ्यमा कुनै समस्या छैन । उहाँ पूर्ण स्वस्थ हुनुहुन्छ । तै पनि उताको उपचारको केही रुटिन फलोअप त गर्नु पर्छ । त्यसैका लागि अस्पताल जानु भएको हो । प्रधानमन्त्री ओली मिर्गौलासम्बन्धी एण्टिबडीलाई शरीरबाट निष्काशन गरी निराकरण गर्ने उपचार विधि (प्लाज्मा फेरेसिस) बाट उपचार गर्न गत ५ भदौमा दोस्रो पटक सिंगापुर जानुभएको थियो । त्यस अघि ओली १८ साउनमा पनि स्वास्थ्य उपचारका लागि सिंगापुर पुगी २७ साउनमा फर्कनुभएको थियो ।
जापानकी पूर्व महारानीलाई स्तन क्यान्सर
टोकियो, २२ भदौ । जापानका पूर्व महारानी मिचिकोलाई स्तन क्यान्सर भएकाले शल्यक्रिया गरिने भएको छ । आइतबार ८४ बर्षीया महारानीलाई प्रारम्भिक चरणमा रहेको क्यान्सरको शल्यक्रिया गर्न लागिएको उनको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । मिचिकोका पति अकिहितोले गत अप्रिलमा औपचारिक रुपमा राज्यसत्ता त्याग गरेकी थिइन् । विश्वमा विगत झण्डै २०० वर्षको राजतन्त्रको इतिहासमा जीवित रहेका राजाले स्वेच्छाले राजकाज त्याग गरेको पहिलो घटना भएको बताइएको छ । महारानी मिचिकोको शल्यक्रिया टोकियो विश्वविद्यालयको अस्पतालमा गर्ने तय भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । स्थानीय संचार माध्यमहरुका अनुसार उनको शल्यक्रिया केही घण्टामै सकिएर त्यसको नतिजा पनि आइतबार बेलुकासम्ममा सार्वजनिक भइसक्ने छ । शल्यक्रिया गर्नुअघि पूर्वराजा अकिहितो र उनकी छोरी सायाको कुरोदाले मिचिकोलाई अस्पतालमै भेटेका थिए ।छोरी सायाकोले एक सर्वसाधारणसँग विवाह गरेपछि उनको राजकुमारीको पदवी खोसिएको थियो । जापानका पूर्वराजा अकिहितो र पूर्वरानी मिचिकोले विश्वमा परम्परागत राजतन्त्रलाई नाटकीय रुपमा आधुनिकीकरण गरेको मानिन्छ । पूर्वरानी मिचिकोको जन्म सन् १९३४ मा टोकियोस्थित टोकियो विश्वविद्यालयको अस्पतालमै भएको थियो । विश्वविद्यालयमा अङ्ग्रेजी साहित्य…
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख
काठमाडौं,१७ भदौ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्यस्थिति सुधारोन्मुख भएको छ । मिर्गौलासम्बन्धी विकारयुक्त एन्टिबडी निष्कासन गर्न प्लाज्मा फेरेसिस उपचार विधि अपनाएपछि उनको स्वास्थ्यमा सुधार भइरहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सिंगापुरस्थित नेसनल युनिभर्सिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वास्थ्यमा सुधार भइरहेको छ । सम्भवतः शुक्रबार स्वदेश फर्कनेछौं’, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमालले टेलिफोनमा भने । प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक डा. दिव्या सिंह शाहका अनुसार एन्टिबडीका कारण शरीरमा क्षति निम्तिन सक्ने भएकाले प्लाज्मा फेरेसिस उपचार विधि अपनाइएको हो । ‘शरीरमा बढेको एन्टिबडी निष्कासन गरिएको हो । यसका साथै शरीरमा अरू एन्टिबडी बन्न नदिने हो । एन्टिबडी बढ्दै गएपछि खराबी हुन सक्छ’, डा. शाहले भनिन् । एन्टिबडी निकालेर मिर्गौलाको कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउन कार्यका लागि प्लाज्मा फेरेसिस उपचार विधि अपनाइन्छ । डा. शाहले भनिन्, ‘एन्टिबडीले मिर्गौलालाई खराब गर्न सक्ने भएकाले निष्कासन गर्न उपचार विधि अपनाइएको हो ।’ पूर्वयोजनाअनुसार एन्टिबडी निष्कासन गर्न सात सेसन प्लाज्मा फेरेसिस गरिँदैछ । अहिले एक दिन बिराएर प्लाज्मा…
अनियमिताको आरोप लागेका पदाधिकारीलाई भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा प्रवेश निषेध
भक्तपुर, १६ भदौ । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका कर्मचारीले नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थामा अनियमितताको आरोप लागेका पदाधिकारीलाई अस्पताल प्रवेश निषेध गरेका छन् । देशभरिका क्यान्सर बिरामीको उपचार गराउने अस्पतालमा अनियमितता गरेको आरोप लागेका संस्थाका अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ ‘ईश्वर’ र महासचिव विमलकुमार होडालाई भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल कर्मचारी कल्याणकारी समितिले अस्पताल प्रवेशमा निषेध गरेको हो । अस्पतालमा आज आयोजित विरोध कार्यक्रममा कर्मचारीले हस्ताक्षर अभियानसमेत सञ्चालन गरेर संस्थामा लामो समयदेखि रहेर बिरामीका लागि र भौतिक संरचना निर्माणमा आएकोे बजेटको दुरुपयोग गर्ने पदाधिकारीलाई अब कुनै हालतमा अस्पतालमा प्रवेश गर्न नदिइने कल्याणकारी समितिका संयोजक शिवराम धुख्वाले बताए । उनले भने, “देशभरका क्यान्सरका बिरामीको उपचारका लागि आएको बजेटमा ब्रम्हलुट गर्ने पदाधिकारीलाई अब क्यान्सर अस्पतालमा कुनै हालतमा प्रवेश गर्न दिदैनौँ, उनीहरु विरुद्ध हस्ताक्षर अभियानसमेत सञ्चालन गरेका छौँ, अस्पतालमा सेवा पनि रोक्दैनौँ ।” उनले अस्पतालमा व्यापकरूपमा भएको भ्रष्टाचार रोक्न पटकपटक आग्रह गर्दा पनि मनोमानी गरेपछि बाध्य भएर अस्पताल जोगाइदिन स्थानीय सरकारका रूपमा रहेको भक्तपुर नगरपालिकालाई लिखितरूपमै आग्रह गरेपछि…
मदिरा पछि भारतमा पान मसलामाथि प्रतिबन्ध
बिहार,१६ भदौ । बिहार सरकारले झण्डै तीन वर्ष पहिले मदिराको बिक्री-वितरणमा लगाएको प्रतिबन्धपछि अब पान मसालामा समेत त्यस्तो व्यवस्था लागु गरेको छ। शुक्रवार बसेको स्वास्थ्य विभागको उच्च स्तरीय बैठकपछि त्यस्तो निर्णय लिइएको बताइएको छ। हालका लागि उक्त प्रतिबन्ध एक वर्षको लागि लगाइएको छ। जस अनुसार अब उक्त राज्यमा पान मसालाको बिक्री, उत्पादन, भण्डारण तथा सेवन र ओसारपसार गर्न पाइनेछैन। बिहारको राजधानी पटनाको बोरिङ्ग रोड चौबाटोमा रमेश गुप्ताको पान र चुरोट बेच्ने पसल छ। त्यही सानो पसलको भरमा उनको गुजारा चल्ने गरेको छ। करिब ५५ वर्षीय रमेशले भने, ‘सरकारले निर्णय गरेपछि त मान्नै पर्ने भयो।’ भिन्न-भिन्न मत ‘पान मसालाहरूको सोखिन मानिसहरूको सङ्ख्या निकै धेरै छ। सरकारलाई यसबाट घाटा हुनेछ। यस्तो व्यवस्था पहिले पनि भएको थियो। तर लत बसेकाहरूले जसरी पनि त्यसको व्यवस्था गर्ने गर्छन्।’ शहरका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका दोकानदारहरूले सरकारको निर्णयबारे त्यस्तै टिप्पणी गरिरहेका छन्। उनीहरूले सरकारको निर्णयलाई व्यवहारिक मानेका छैनन्। तर, इन्दिरा गान्धी आयुर्विज्ञान संस्थानका वरिष्ठ चिकित्सक डा. हर्षवर्धनले सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको…
जिल्लामा पहिलो पटक सेनिटरी प्याड सेवा
बझाङ,१२ भदौ । जिल्लाको छविसपाथिभेरा गाउँपालिकाले बान्नीचौर माविमा सेनिटरी प्याड एटीएम सेवा शुरु गरेको छ। गाउँपालिकाकी उपप्रमुख राधिका जोशीले महिनावारीका वेला धेरै छात्रा विद्यालय नआउने गरेका कारण यस्तो व्यवस्था गरेको जानकारी दिइन्। उनले अब महिनावारी भएका कारणले छात्रा स्कुल क्रम अन्त्य हुने बताइन्। एटिएमसहितको सेनिटरी प्याड शौचालय जिल्लामै पहिलो हो। ५० छात्रालाई शौचालय एटीएम कार्डसमेत वितरण गरिएको छ। सेनिटरी प्याड निकाल्न एटीएममा लाग्ने शुल्क गाउँपालिकाले व्यहोर्ने उपप्रमुख जोशीले जानकारी दिइन्। विद्यालयले पनि प्याडका लागि लाग्ने न्यूनतम शुल्क राख्ने बान्नीचौर माविका प्राध्यापक लोकेन्द्र सिंहले जानकारी दिए। विद्यालयले प्याड खरिद गर्न महंगाे हुने भएका कारण प्याड बनाउने तालिमसमेत दिइसकेको बताए। अब गाउँघरमै सेनिटरी प्याड उत्पादन हुने उनकाे भनाइ छ।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल: नगरपालिका र पुरानो ब्यबस्थापन समितिबीच टकराब तर बिरामीले पाउन थाले सहज सेवा
भक्तपुर, १० भदौ । भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई भक्तपुर नगरपालिकाले आफू मातहत ल्याएपछि सेवाग्राहीले पाउने सुविधामा सहज भएको छ । सेवाग्राहीले पाउने सेवामा कुनै समस्या नभए पनि अस्पतालमा पुरानो व्यवस्थापन समिति र नगरपालिकाबीच अधिकारको विषयमा भने तनाव कायमै छ । अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. ऋषिकेशनारायण श्रेष्ठले अस्पतालको सेवा सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिँदै दैनिक १० वटासम्म जटिल शल्यक्रिया हुने गरेको बताउनुभयो । नगरपालिकाको व्यवस्थापन आएपछि सहज ढङ्गले उपचार सेवा दिन सकेको जानकारी दिँदै उहाँले बिरामीको उपचारमा कुनै बाधा अड्चन नआएको प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले पुरानो व्यवस्थापन हुँदा दैनिक ८० जना बिरामी भर्ना हुने गरेकामा हाल १२० जना बिरामी भर्ना हुने गरेको जानकारी दिनुभयो । पुरानो समिति हुँदा दैनिक पाँच जनासम्मको शल्यक्रिया हुने गरेकामा हाल आठदेखि १० जना बिरामीको जटिल शल्यक्रिया हुने गरेको डा. श्रेष्ठले बताउनुभयो । पछिल्लो समय बिरामी भर्नाका लागि आवश्यक बेडसमेत नभएको उहाँको भनाइ छ । नगरपालिकाले दूधपाटीस्थित भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको पुरानो व्यवस्थापन समिति विघटन गरेर नगरपालिकाका प्रमुख सुनील प्रजापतिको…
काठमाडौं । करोडौं नेपालीलाई अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे निकै चासो छ । उपचारका लागि सिंगापुर पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे धेरैले प्रश्नसमेत गरिरहेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई कस्तो होला ?’ प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक डा. दिलिप शर्माले भने सिंगापुरमा प्रधानमन्त्रीको नियमित उपचार प्रक्रिया थालिएको र उहाको अवस्था सामान्य रहेको जानकारी दिए । डा. शर्माका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको सिंगापुरस्थित न्यासनल युनिभर्सिटी अस्पताल (एसएनयू)मा उपचार प्रक्रिया थालिएको छ । एन्टिबडी शरीरबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । ‘उहाँको उपचार प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ र उहाँ पूर्ण रूपमा खतरामुक्त हुनुहुन्छ,’ शर्माले भने । प्रधानमन्त्रीको मिर्गौलाको थप परीक्षण र क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक उपचार थालिएको डा. शर्माले जानकारी दिए । मिर्गाैला रोग विशेषज्ञ डा. ऋषि काफ्लेले प्रधानमन्त्री ओलीको ट्रान्सप्लान्ट गरिएको मिर्गौला बिस्तारै कमजोर भएको बताए । उनले भने, ‘ट्रान्सप्लान्ट गरिएको किड्नी बिस्तारै कमजोर भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सिंगापुर लगिएको हो । त्यसपछि पहिलो चरणको उपचार सुरु भयो । पहिलो चरणमा भएको उपचारबाट प्रधानमन्त्रीमा के सुधार…